Amanqaku ka-Alicia Rother kwi Martech Zone |
Amanqaku ngu UAlicia Rother
UAlicia Rother sisicwangcisi somxholo ozimeleyo osebenza namashishini amancinci kunye neziqalo zokunyusa ukufikelela kwabo kwi-brand yoyilo lomxholo kunye nokubhala. Indawo yakhe yobungcali ibandakanya ukuthengiswa kwedijithali, i-infographics, uphawu kunye noyilo lwegraphic.
NgoMvulo, Matshi 15, 2021 NgoMvulo, Matshi 15, 2021 UAlicia Rother
Ngenye imini, xa sithetha ngeelogo, i-logo eyiliweyo ye-IBM, i-UPS, i-Enron, i-Morningstar, Inc. UPaul Rand Ukuze abe sesona sazisi sipheleleyo nesimele ummandla wophawu lwakho, lonke uphawu kuyilo lwelogo yakho kufuneka lubekhona ngesizathu. Umba ngamnye kufuneka uxelele into malunga negama lakho. Ubume obukhethileyo, imibala oyikhethayo, kunye neefonti ozikhethayo, kufuneka zibe yinxalenye yazo